काठमाडौं : यो हप्ता ‘स्याटलाइट’ विशेष चर्चाको विषय बन्यो। सरकारले अबको ३० महिनाभित्र आफ्नै स्याटलाइट लन्च गर्ने योजनाका साथ फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। फ्रान्स सरकारसँग भएको यो हस्ताक्षर २५...
काठमाडौं । संसारभर सहज र सहुलियत दरमा सूचना प्रविधिको पहुँचबाट आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिने होड चलिरहेका बेला नेपालको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य भने विश्वकै सबैभन्दा महंगो देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालले नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको...
काठमाडौँ । १ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सलाई ‘भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्ब्ली प्लाण्ट’ राख्न अनुमति दियो । सो कम्पनीले गाडी उत्पादन र एसेम्बलिङ प्लाण्ट राख्नको लागि सरकारबाट...
काठमान्डौ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले अपराधिक गतिविधी बढेको, विभिन्न जातजाति, धर्म-भाषाबीच एकता भड्काउने लगायतका दुरुप्रयोगप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण...
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता...
भैरहवा । लुम्बिनीकालागी आएको बिजुली बस गत मंगलबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेका छन् । काठमाडौंमा सुरुवात गरिएको बस लुम्बिनीका लागी आएको हो । लुम्बिनीदेखि भैरहवा, लुम्बिनीदेखि तिलौराकोट, लुम्बिनीदेखि रामग्राम चलाउनेगरी एशियाली...
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि आजदेखि अटम अफरअन्तर्गत विभिन्न २२ अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई कम शुल्कमा बढी सुविधा दिन ह्याप्पी विकेन्ड प्याक, अल टाइम डाटा प्याक, नाइट टाइम...
बजारमा आयो बलात्कारबाट जोगिने ‘रेप प्रुफ पेन्टी’, मूल्य कति ?
एजेन्सी । अहिले नेपालसहित विश्वभर नै बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। बलात्कारका घटनामा महिला आफै पनि स्वयंम सुरक्षित हुनुपर्ने भएको छ । यस्तै बलात्कारका घटनामा कमी ल्याउनका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा एक छाज्ञाले बलात्कारबाट बचाउन...
अब उड्ने स्कुटर आउदै, हेर्नुस् कति छ मूल्य
एजेन्सी । चीनको गुआंडोंग प्रान्तका डोंगुआन शहरमा ज्हाओ डेली नामका एक ब्यक्तिले एउटा फ्लाइङ स्कुटर तयार पारेका छन् । डेलीले यो विश्वको पहलिो फ्लाइङ (उड्ने) स्कुर भएको दावीसमेत गरेका छन । अहिले उनी ४०...
इन्टरनेट डोमेन अब नेपाली भाषामा !
काठमाडौं । इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम हान्नुपर्छ । तर, चाँडै नै नेपाली भाषामा पनि इन्टरनेटको डोमेन नेम उपलब्ध हुने भएको छ । विश्वभर इन्टरनेटको डोमेन नेम...